Ulungele ukubhalisa kwisikolo se-biz? Ezi ncwadi zovavanyo zokuqala zenza ukuba kube ngokoqobo
Ngoko, wanquma ukuba ulungele ukubhalisa kwisikolo seshishini. Ngoku kufuneka ufunde kwaye ulungiselele i-GMAT. Kwaye sinokukunceda kuloo nxalenye. Incwadi esemgangathweni ye-GMAT prep iqukethe imibuzo efana neyona nto uza kuyibona ngomhla wokuhlolwa, kwakunye nezicwangciso ezihambelana neemfuno zakho kunye nexabiso elihambelanayo nebhajethi yakho. Ingaba ufuna ukungena kwelinye leenkqubo ze-MBA eziphezulu kwilizwe, ukuphucula amanqaku akho emathematika okanye ukhusele i-scholarship nge-essay essay, uzakufumana incwadi ye-GMAT prep efanelekileyo kuwe kuleluhlu.
I-GMAT Official Guide (efumaneka kwi-Kindle kunye nokuprintwa) ibhaliwe ngababhali beemviwo. Ngaloo ndlela, imibuzo oza kuyibona apha ifana kakhulu naleyo uya kuhlangana nayo kwi-GMAT yangempela.
I-GMAT Isikhokelo Sokuqala siqala ngengcaciso ecacileyo yecandelo ngalinye lovavanyo, elona luncedo xa ungayazi kakuhle ifomathi okanye umxholo. Le ncwadi ibandakanya imibuzo engaphezulu kwama-900 engokoqobo kunye neenkcazo zempendulo ezicacileyo ngamnye, kwakunye nokuhlaziywa ngokubanzi kwezibalo kunye negrama ezihambelana namacandelo anokwakheka kunye nezivakalisi ze-GMAT. Ukuthenga kwakho kukunika nokufikelela kwizinto ezibonakalayo zokusetyenziswa kwikhompyutha, kubandakanywa iiseti ezinokwenziwa ngokwezifiso zombuzo onokuzihlanganisela kwiimbobo ezifanelana namandla akho kunye nobuthathaka.
Ukuba usuvele ubeka amanqaku kakhulu kwiqendu le-GMAT kwaye ufuna ukunyusa, iMathattan Prep ye-GMAT Advanced Quant ingakunceda uzive ungaphezulu kokulawula. Esi sikhokelo sikheleke ngokukodwa kubafundi abasele baqhelanise nezinto ezisisiseko secandelo lamanani, abadingi ukuhlaziywa kwezibalo ezipheleleyo, kwaye bafuna ukufumana amanqaku angama-650 okanye ngaphezulu kwi-GMAT math section.
Isikhokelo se-Manhattan Prep esiphezulu siquka imibuzo engama-250 kunye nezicwangciso zokunqoba ukuchithwa kwengxaki ephezulu kwizinga eliphezulu neengxaki ze-GMAT. Zonke izicwangciso kunye neengcinga zijoliswe kumbuzo obunzima kakhulu oya kubona ngomhla wokuhlolwa. Ukuthenga le ncwadi kukunika ilungelo lokufikelela kwiBhanki eSebenzayo yaseKhaya kunye ne-Advanced Quant Bonus Drill.
Nokuba ungeyena umfundi onolwazi kunye nomlobi, igratra yeGGAT ingabonisa umngeni. Imiba ekhethekileyo yegrama ihlolwa kwiimviwo, ngokukodwa kwimibandela yokulungiswa kwezivakalisi ngaphakathi kwecandelo loLwimi. Ukuhlaziywa kwegrama yohlobo lwe-GMAT, njengaleyo ehlinzekwe kwi-GMAT yeDummies (efumaneka kwi-Kindle, kunye nakwiphepha lephepha) inokubangela ukwesaba kwakho.
I-GMAT yeDummies iyanceda ngakumbi xa ungaqinisekanga ukuba ungasebenzisa njani ezinye, izikhokelo zokuhlola ezikhudlwana. Yonke into ecacileyo, isiNgesi esithethayo. Emva kohlolo olubanzi lweemviwo, abalobi beencwadi baya kukuthatha kulo nxalenye nganye yovavanyo lwezinyathelo ngeyinyathelo. Ukuphononongwa kweengcamango ezifanelekileyo zezigrama (kunye neenkcukacha ezenziwa kunye) zigqwesileyo, zicacile kwaye zicacile. Le ncwadi iquka iimvavanyo eziqhelekileyo ezi-5 ezipheleleyo ze-GMAT, ezimbini zokushicilela kunye ezintathu kwi-intanethi, kunye nokufikelela kwizinto zokufunda ezongezelelweyo kwi-intanethi.
Icandelo lokuqiqa elidibeneyo le-GMAT liye lahlala lijikeleze ukususela ngo-2012, ngoko ke akubona zonke izixhobo zokuzibandakanya ziquka iingcebiso ezicacileyo (okanye naziphi na iingcebiso, malunga naloo nto) malunga nendlela yokucoca imibuzo edibeneyo. Ukuba unenkathazo ngecandelo elifutshane le-IR kodwa elincomekayo kwiimvavanyo zakho ze-GMAT, iMcGraw-Hill Education Yokunqoba i-GMAT Math kunye noHlelo oluHlangeneyo loMncedisi kunye nokushicilela) iya kuba yongezwa kakuhle kwi-GMAT yakho yokuqala yeencwadi zokuqokelela. Nangona le ncwadi ixhomekeke kakhulu kwi-GMAT math, ikwaquka esinye sezikhokelo ezinzulu kwiinkalo zokuxubusha ezidibeneyo kwimarike.
Into ebaluleke kakhulu ngecandelo le-IR liyinkimbinkimbi kangakanani, ngombuzo ngamnye kuquka iinkalo ezininzi kwaye ufuna iindidi ezininzi zokuqiqa. Ababhali bale ncwadi yokuqhawulayo bayaphula phantsi isampuli imibuzo e-IR kwizinto zabo ukuze ungalokothi udideke, kwaye uhambe ngeendlela ezahlukeneyo imibuzo ukuze usebenzise oko ufundile. Le ncwadi ibandakanya iimvavanyo ezimbini zokufunda iimvavanyo ze-GMAT ezizeleyo kunye nobude obude obupheleleyo be-GMAT.
Ukuba ungezantsi kwixesha lokufunda elikhoyo kunye neemfuno zokumelana novavanyo, Impumelelo ka-Brandon Wu yeentsuku ezingama-30 ye-GMAT iya kukunceda kwi-pinch. Ehlelwe ukubonelela ngesikhokelo esipheleleyo kwi-GMAT ngexesha elifutshane, le ncwadi yokulungiselela ifikeleleke kwaye ilula ukuyifumana.
Ngenxa yokuba kuthethwa kukukunceda ngamaxesha anesigxina, i-30-Day Day GMAT Impumelelo - enokuthengwa ngohlobo lwe-Kindle kunye okanye kwifom yephepha-kugxininisa ngakumbi kwiingcebiso kunye namaqhinga kunokwakhiwa kwezakhono. Ukulwa nokuqonda iimpawu zeGGAT? Kukho iphepha lokukopela. Awukhumbuli zonke iigama zezibalo ze-GMAT ezifanelekileyo? Kukho iphepha lokukopela kulo, nalo. (Ufumana le ngcamango.) Kukho imibuzo yokusebenza kunye nezicwangciso zokuvavanya apha, kodwa into eyingqayizivele malunga nale ncwadi kukuba kukunceda ukuba unqunyulwe ngokugqithiseleyo ukuze ube nokutya kwinto oyifunayo kakhulu.
I-GMAT-abathathi-vavanyo bavame ukufumana imibuzo ebalulekileyo yokuqiqa ukuba ibe yinto enzima kakhulu. Ngokukodwa, kunzima ukwazi ukuba kuphela ingxabano, kodwa ngokuthe ngqo. I-Bible's Critical Reasoning Bible ye-PowerScore, inxalenye yayo ye-GMAT Verbal Bible Trilogy, iya kukunceda udibanise ingxabano nganye kwi-GMAT kwaye uyihlalutye ngokubanzi. Ngokukodwa, abafundi babika ukunciphisa kakhulu inani elichitha ixesha ngalinye kwi-GMAT umbuzo oqiqa umbuzo emva kokusebenzisa i-PowerScore's prep strategies.
Incwadi ibandakanya uhlalutyo olunzulu lwemibuzo nganye yeengcamango ezibalulekileyo ze-GMAT, yonke into enobungqina obuya kuhlangana nayo kwi-GMAT, kunye nesikhokelo sendlela yokuhlukanisa iimpendulo zomgibe eziqhelekileyo kwiimpawu ezichanekileyo. Izicwangciso ozifundayo kule ncwadi ziya kukunceda ne-GMAT imibuzo ebalulekileyo yokuqiqa kunye novavanyo lokubhala ngokuhlalutya. Ukuthenga kwakho kukunika nokufikelela kwiintlobo ezahlukeneyo ze-PowerScore GMAT.
Ngaba ukhathazekile malunga nendlela yokusebenzisa isicatshulwa se-GMAT? Ukubhaliweyo kwabaBashicileli be-GMAT Ukubhala ngokuCwangcisa: IziSombululo kwiSigqibo esiPhakathi Isihloko siya kukunika yonke imizekelo oyifunayo iimpendulo eziyimpumelelo kwi-essay essay. Inika ixabiso elikhulu kunye nekhokelo epheleleyo kwi-essay ye-GMAT.
Le ncwadi ibandakanya amashumi mathathu Ukuhlalutya isampula yokuphikisana okumele uyenze kunye nayo, kunye neendlela ezahlukeneyo zokubhala kwangaphambili. Ababhali bencwadi baya kukuthatha ngeendlela zokuhlalutya ingxabano enikeziweyo, ukufumana iimpazamo zayo eziphambili kwaye uphakamise ezinye iindlela eziza kuqinisa ingxabano. Ukubhala nokuHlola kwe-GMAT kunika kwakhona izikhokelo zokujonga ukuba uhlolisise ukubhala kwakho njengoko uqhubeka.
Ukuba unenkathazo yokufumana iigatshana zokufunda ukuqonda nge-GMAT ngexesha elifanelekileyo okanye ukhetha ulwazi olufanelekileyo, i-PowerScore Reading Comprehension Bible iya kuba ngu-godsend. Ukufunda iBhayibhile ukuqonda iquka iisampuli zeempendulo, imibuzo kunye nohlalutyo lombuzo ngamnye wombuzo, kunye nokubethelwa kwezakhono ezithile.
I-GMAT Reading Comprehension Bible iya kukunceda udibanise uhlobo oluthile lokufunda isicatshulwa kwizinto zalo ezifanelekileyo kwaye uhlolisise ngokuchanekileyo nangempumelelo ukuze ufumane ulwazi olufunayo. Ukongezelela, ukuphonononga amavesi okuqonda okufunda, imibuzo, izicwangciso kunye nokuqhuba, iBhayibhile yokuFunda ukuqonda iquka ukufikelela kwiinkcukacha ezongezelelweyo zokwenza izinto kwi-intanethi kunye neengcebiso.
I-Heisman Trophy Abaphumeleleyo ngeSikolo
Yintoni Ebangelwa YiNtlanzi?
Iimemori zeJoggers ukuFaka iZifundo zakho
Umlambo woMlambo weCombahee